एकता टुंग्याउन जुटे प्रचण्ड, असन्तुष्ट पक्षलाई सम्झाउन बढ्याे सक्रियता ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एकता टुंग्याउन जुटे प्रचण्ड, असन्तुष्ट पक्षलाई सम्झाउन बढ्याे सक्रियता !
भदौ ६ गते, २०७६ - १५:०७
माधव नेपालको असन्तुष्टीबारे छलफल
अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबारदेखि नै विशेष कार्यसूची बनाएर एकता प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका नेताहरुसँग भेटघाट र छलफलमा जुटेको पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग लामो छलफलसमेत गरेको बुझिएको छ ।
काठमाडौं । पार्टीको पूर्ण जिम्मेवारी पाएसँगै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियता बढेको छ । बिहिबार बसेको पार्टी सचिवालय वैठकले अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेसँगै अध्यक्ष प्रचण्डले सक्रियता बढाएका हुन् । पार्टी एकतापश्चात करिब १८ महिनापछि पार्टी अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन सक्रियता बढाएको नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पार्टी एकतामा पदिय घटुवा गरिएसँगै निकै असन्तुष्ट बनेका माधव नेपाललाई समझदारीमा ल्याउन अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बिहान करिब २ घण्टाभन्दा बढि लामो छलफल गरेका थिए । अध्यक्ष निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा बरियता व्यवस्थापन र सचिवालयले अस्वीकार गरेको नेता नेपालको प्रस्तावमाथि छलफल भएको बुझिएको छ ।
बिहिबारको सचिवालय वैठकमा अर्का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबिच निकै भनाभनसमेत भएको थियो । एकताकै प्रक्रियामा रहेको बेला पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच भएको विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले छलफललाई अगाडि बढाएको नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । एकताका बाँकी काम टुंग्याउनु पूर्व असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिलाई ल्याउनु पर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल बढाएको बुझिएको छ ।
केहि दिनमै एकिकरण टुंग्याउने तयारीमा
पार्टी एकताको लामो समयसम्म पनि कतिपय एकता प्रक्रियाका कामहरु बाँकी रहेको प्रति अध्यक्ष प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् । पार्टी शीर्ष नेतृत्वमा कुरा टुंगीन नसक्दा टुंगो लाग्न नसकेका कतिपय एकताका कामहरु छिट्टै टुंग्याउने गरि प्रचण्डले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ । असन्तुष्ट नेताहरुसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एकतालाई टुंग्याउन लागि परेको जनाइएको छ ।
एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि विभिन्न आयोग, मञ्च र प्रवास कमिटिबारे जिम्मेवारी टुंग्याउन भने बाँकी छ । त्यस्तै पार्टी एकतामा महत्वपूर्ण मानिएको पोलिटब्यूरो गठन अझैसम्म हुन सकेको छैन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पोलिटब्यूरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन लगायतका कामहरुपनि टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ ।
जनवर्गीय संगठनलाई पूर्णता दिँदै
विभिन्न जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्षहरुको टुंगो लगाएपनि सांगठनिक एकता भने अझै हुन सकेको छैन् । एकता प्रति कतिपयको असन्तुष्टीका कारण कतिपय संगठनहरुको वैठकसमेत बस्न सकेको छैन् । अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व टुंग्याइएको तर एकता प्रक्रिया नटुंगीएको संगठनहरुलाई भेला तथा वैठकहरु राख्न निर्देशन दिने तयारीमा छन् ।
भाद्र १ मा बसेको सचिवालय बैठकले २२ संगठनहरुको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको टुंगो लगाएको थियो । सचिवालयले टुंगाएको विभिन्न ६ जनवर्गीय संगठनबारे पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसअघि ‘नोट अफ डिसेन्ट’को प्रस्ताव नै राखेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व बारे असन्तुष्ट बनेका नेता माधव नेपालसँग छलफल गरिसकेको बुझिएको छ ।
स्थायी समितिको बैठक बसाल्ने तयारी
पार्टी एकताका धेरै कामहरु शीर्ष केहि नेता र सचिवालय बाटै मात्र टुंग्याउँदा धेरै नेताहरुमा असन्तुष्टी देखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समितिको वैठक राखेर छलफल गर्ने तयारी गरेको थालेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघिको एकताका विषय र बाँकी पार्टी कार्यक्रमबारे पनि स्थायी समितिमा छलफल गर्ने तयारी थालेका छन् । उनले एकता प्रक्रियामा असन्तुष्ट बनेका नेताहरुसँग समेत सुझाव लिने तयारी गरेको बुझिएको छ । स्थायी समितिको वैठक भने अर्का अध्यक्ष केपि शर्मा ओली आए लगत्तै हुने जनाइएको छ ।
भदौ ६ गते, २०७६ - १५:०७ मा प्रकाशित